Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla Hamdok ayaa sheegay iney dowladdiisu aqbaleyn fikirka Itoobiya | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla Hamdok ayaa sheegay iney dowladdiisu aqbaleyn fikirka Itoobiya
Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla Hamdok ayaa sheegay iney dowladdiisu aqbaleyn fikirka Itoobiya ka soo yeedhay.
Dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan wadahadalladi u dhaxeeyey ee xalka looga raadinayey muranka biya xireenka ka dhashay ayaa istaagay.
Hasayeeshee, Masar ayaa toddobaadkan cabashadeeda ku aaddan Wabiga Nile ee Itoobiya kala dhaxeeyo u gudbisay qaramada midoobay.
Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla Hamdok diidmada fikirka Itoobiya wuxuuu sababeeyey biyo-xireenka Itoobiya uu dhismahiisa gabagabada marayo iney jiraan qodobbo dhinaca farsamada oo aan weli heshiis laga gaarin.
Masar iyo Suudaan waxay cabsi aad u weyn ka qabaan biyo xireenka Itoobiya ay dhiseyso haddii lagu billaabo qabashada biyaha wabiga Nile iney biyo yari soo food saareyso.
Dalka Itoobiya oo mashruucan balaayiinta doolar ku bixiyey si uu uga baxo baahida dhinaca korontada ka haysato wuxuu qorsheynayaa bisha July ee soo socota inuu billaabo keydinta biyaha biya xireenka uu u baahan yahay.
Seddexda dal bilooyin ka hor shir ay si wadajir ay u soo qabanqaabiyeen Mareykanka iyo Bangiga Adduunka oo ka dhacay magaalada Washington ayay marki ugu dambeysay ku kulmeen balse kulankoodaasi uu ku soo gabagaboobay Natiijo la’aan.
Gaar ahaanna dalka Itoobiya heshiiski ugu dambeeyey waxay ugu baxay iyada sheegtay heshiiska ay soo jeediyeen Mareykanka iyo Bangiga adduunka inuu u janjeero rabitaanka Masar sidaana ay heshiiska ku qaadacday.
Dalka Masar oo qarniya badan biyaha ugu badan ee wabiga Nile isticmaalayey ayaa cabsi weyn ka qaba biyo xireenka Itoobya inuu saameyn u geysto ayaa bilooyinkii u dambeeyey ku howlaneed sidii ay Mareykanka iyo waddamada carabta ay taageero uga heli lahayd.
Waddamada jaamacadda carabta oo baaq ay ku taageerayaan rabitaanka Masar soo saarayna waxaa diidday dowladda Suudaan.
Go’aanka diidamada ee Suudaan ka qaadatay jaamacadda carabta wixi ay isku raaceen waxaa si weyn uga mahad celisay dowladda Itoobiya, halka ay dhinaca Masarna eed aad u weyn kala kulantay.
Dowladda Itoobiya waxay dhankeeda soo jeedisay tala bixinno ay ku sheegtay mid ay danteeda ku jirto heshiis kama dambeys ahna looga gaari karo muranka seddexda dal muddada dheer u dhaxeeyey.